नेकपाको चियापान : भीआईपीलाई स्वान्डविच ,सर्बसाधारणलाई लड्डू र केरा !::Hamrodamak.com
नेकपाको चियापान : भीआईपीलाई स्वान्डविच ,सर्बसाधारणलाई लड्डू र केरा !
चियापान कार्यक्रमका लागि चियापानको ठेक्का अर्पण ब्याङ्केटबाट दिईएको छ। चियापानमा नास्ताको मेन्यूमा केरा, लड्डू, खस्ता कचौरी र चिया राखिएको थियो ।
काठमाडौं। भृकूटीमण्डपमा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) को चियापानमा सहभागिहरुका कारण भृटुकीमण्डप क्षेत्रमा धेरै नै भीडभाड बनेको थियो । चियापान कार्यक्रमका लागि चियापानको ठेक्का अर्पण ब्याङ्केटबाट दिईएको छ। चियापानमा नास्ताको मेन्यूमा केरा, लड्डू, खस्ता कचौरी र चिया राखिएको थियो ।
कार्यक्रममा भीआईपी पाहुनाको लागि भने २ हजार स्वान्डविच तयार गरिएको थियो । २ हजार स्यान्डविचमा ३५ किलो चिज र ३५ किलो बटर राखिएको हो ।
ब्याङ्केटका अनुसार चियापान कार्यक्रमकै लागि कात्तिक ३ देखि नै निम्की, खस्ता कचौरी, लड्डूलगायत तयार गर्न थालिएको थियो । जसका लागि ३ गतेदेखि नै २० जना कूक खटिएका थिए । र आजको चियापानका लागि फिल्डमा १५० कर्मचारी खटिएका हुन ।
नेकपाले चियापानका लागि ५० हजारलाई निमन्त्रण दिएको बताइएपनि नास्ता भने २० हजार जनाको लागि मात्रै तयार गरिएको थियो । चियापान तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) काे पार्टी एकतापछि पहिलोपटक आयोजना भएको हो ।